Oo sidaas waa inaad ka shaqeynayeen warqad dheer oo aad maalintii oo dhan iyo si lama filaan ah ka heli kartaa in aad computer. Waxaa laga yaabaa in ay tahay file muhiim ah in aad ka shaqeynayeen shirkad aad muddo bilo ah oo ACK! Waxaad ku si qalad ah la tirtiro. Waxaan oo dhan ayaa halkaas meelaha qaar. Waxaa caadi ah in ay tirtirto xog qalad ah markii aad ugu yaraan ka filan. Ka soo kabashada file tirtiray noqon niyad iyo amarkooda culus laakiin aan karin mar dambe. In this article, waxaan kala hadli saddex siyaabood fudud inuu ka soo kabsado files si qalad ah la tirtiro ee SNAP ah.
Ayaa shaqada Ctrl Z +
Ayaa shaqada Ctrl Z + Waa mid ka mid ah tuuryo keyboard ugu awooda badan qasi tirtirto. Waxaa wax laga xumaado, in kastoo, aad u yar oo dadka isticmaala ay u isticmaalaan. Waxaa laga yaabaa in ay ma ogsoona sida uu awood badan shaqada waxa ay noqon kartaa ama si fudud iska dhega tirin. Waxaad dhahdaa tusaale ahaan aad xulashada files kala duwan by haysta hoos u muhiim ah Ctrl iyo wareegsan gaararka xulashada files isticmaalaya dulqabo. Markaas, adiga oo aan ogolaansho, in aad ku dhacay muhiim ah Del iyo dhammaan faylasha aad ayaa loo doortay tageen! Maxay aad rabto in la joogo waa inuu ka soo kabsado faylasha tirtiray sida ugu dhakhsaha badan oo aan xanuun lahayn sida ugu macquulsan. Waa hagaag, uma baahnid inaad ahayn kuwo Fadhiista iyo bilowdo ooyaysa kaani oo kale mar. Waxaa caadi ah in la helo dad kale istiraatijiyeeyn sida si ay u abuuraan file tirtiray cusub, laakiin waa run ahaantii waa u qalantaa?
Dhammaan waxa aad u baahan tahay inaad samayso waa isticmaali keyboard toobiye Ctrl Z + ah. Tani waxay ku soo celin doonaa dhammaan faylasha tirtiray isla. Raac tallaabooyinka soo socda ee fudud.
Si aad u soo celin file ah la tirtiro ama folder,
1. Open Computer adigoo gujinaya button Start iyo ka dibna Computer.
2. Fur gal ah in loo isticmaalo si loo xakameeyo folder tirtiray
3. hay Ctrl Z iyo furayaasha isku mar qasi tirtirto.
Haddii aad gacmahaaga oo aan aqoon keyboard ah si fiican, waxaa laga yaabaa in aad rabto in aad isticmaasho guntimihii tirtirto doorasho by midig ka dib markii tallaabooyinkan fudud.
3. midig u guji darafka dooro tirtireyso tirtirto sida ku cad image ka
Sida ay tani soo celin doonaa files aad dhawaan tirtiray sida Ctrl Z + lahaa.
Mararka files aad soo xulay si qalad ah nuqul laga yaabaa in folder ay markii hore ku badbaaddeen. Fursadda in ay si folder kale oo lid ku ah rabitaanka dhaqaaqi doono. Ka hor inta aadan ka dhacay badhan argagax cas oo waaweyn, xusuuso in la isticmaalo awoodda ka-Ctrl Z + toobiye ah si loo beddelo xaaladda this.
Soo Celinta ka Recycle Bin
Qof kasta oo leh xirfadaha aasaasiga ah ee kombuyuutarka fahamsan yahay in files, marka la tirtiro waxaa si toos ah loo wareejiyay Recycle Bin. Ma ogtahay files ee Recycle Bin karo si dhab ah loo soo celiyo? Waa hagaag, tan iyo tirtirka file shil uusan ka fogayn tallaabo dadweynaha, waxaa xusid mudan in awood Recycle Bin. Files tirtiray la raadsan karaa bin recycle runtii, soomi. Si kastaba ha ahaatee, files si joogto ah la tirtiro aan dib loo isticmaali in bin recycle iyo waxay u baahan yihiin qalab kabashada xogta awood badan inuu ka soo kabsado iyaga.
The toobiye recycle bin waxaa si cad ku yaal desktop ee nidaamyada hawlgalka ugu.
Haddii aad ayaa laga badiyay file muhiim ah, waxaa jira fursad waxaa ku nasanayso bin recycle sugitaanka si aad u noolayno labaad. Raac talaabooyinka soo socda si ay u burburin lahaayeen tirtirto ka Recycle Bin.
1. click Double on icon recycle bin ah si aad u furto.
2. Marka ay tahay furan, waxaad arki doontaa dhammaan faylasha tirtiray sida ku cad jaantuska hoose
3. midig u guji in Recycle Bin dooro tirtireyso tirtirto
4. Mararka qaarkood bin recycle ku jiri kara files badan tirtiro oo kale in loo helo file ee su'aasha noqdo shaqo adag. Halkan, waxaad u baahan doontaa inaad raadiso faylka gaarka ah ee sanduuqa raadinta iyo soo celin. Haddii aadan hubin in aad si dhab ah file ee su'aasha la tirtiro, ama laga yaabee in aadan xusuusan karin magaca dhabta ah ee faylka tirtiray, xaq-riix furmo, hal dhibic si ay "sort by", dooro "taariikhda tirtiray" in u arkaan files in dhawaan la tirtiro. Waxaad markaa file soo celin karaa si fudud oo sii dhoola
Soo Celinta iyadoo la kaashanayo Wondershare Data Recovery
Mararka qaarkood oo dhan hababka kor ku xusan dhici karta in uu badbaadiyo maalintii. Files dhaco tirtiro mararka qaar ku adkaan si loo soo celiyo. Tani caadi ahaan waxay dhacdaa haddii xogta ayaa la overwritten. Waxaad og tirtirto laga yaabaa file ah oo bilaash ah ilaa meel ka wadid aad u adag oo kaliya in ay ogaadaan sida ay muhiim u tahay in file ahaa toddobaad ay u badan tahay bilood ka dib. Halkaa marka ay marayso, waxaad isku dayi ka trick Ctrl Z + laakiin nasiib darro ma caawin karaan. Waxaad dul istaagin dhex bin recycle ku file-by-file in dalab in ay helaan faylka tirtiray oo mar kale ma shaqayn karaa. Daruur ah oo jahawareer iyo rajo-aad koobay oo aadan aqoon waxa la sameeyo.
Wondershare Data Recovery Yimaado anfacaya in xaaladan. Tani waa qalab loogu talagalay qof kasta. Uma baahnid noqon professor ah ee sayniska xogta si aad u isticmaasho. Iyadoo qalab, soo kabsaday xogta laga badiyay waa click ka tagayo. Qalabkani waxa uu kaa caawinaysaa in aad soo kabsado xogta lumay oo uu soo si qalad ah la tirtiro ama lumay ee hadba siyaabo. Haddii ay tahay tirtiray Cajalado, videos, waraaqaha magacaabo it! Wondershare Qalab kabashada xogta ugu dambeyntii waa saaxir ah. Waxaa la soo suugaan loogu talagalay gobolka of technology tahay in ay la tacaalaan xaaladood khasaaro xogta kala duwan. Haddii aad ayaa laga badiyay xogta aad dhex tirtirka shil ah, formatting, howlgal aan habboonayn ama xaaladaha sida virus computer cunista ilaa xogta aad, Wondershare bixisaa xal bay layntii, kuwaas oo xaaladaha xogta khasaaraha oo dhan.
Qaado tusaale ahaan aad ku ka your computer ka shaqeeya files muhiim ah oo ay heli karaan iyaga. Waxaad tegayna tirtirto la isticmaalayo qalab kabashada Wondershare xogta si fudud. Oo yaanay u ahaan kaliya drives adag, Wondershare qalab kabashada xogta kuu ogolaanaysaa inaad soo kabsado xogta laga badiyay ka drives dibada ka yimaada sida drives dibadda adag, USBs, telefoonada gacanta, iPod, ciyaartoyda MP3 / MP4 kamaradaha digital ah iyo qaar badan.
Qalabkani waxa uu la yimaado afar doorasho soo kabashada gaar ah in la damaanad qaado si aad u ogaato wax kasta oo aad si fudud oo dhaqso maqan. Halkan waxaa ah sidii ay u tagaan oo ku saabsan.
1. Dooro habka soo kabashada doorbidayso
2. Sawirka aad computer ama qalab
3. Kulanka Xiisaha Leh, kabsadaan iyo badbaadin files soo kabsaday
Qalab ayaa ku soo beegmay iyada oo qaabab 4 kabashada kaa caawinaya inaad dib u soo ceshano dhammaan faylasha lumay:
Ayaa dib u soo kabashada hab Wizard - hab kabashada Tani waxay kuu ogolaanaysaa inaad ka heli files lumay ay ka jawaabidda su'aalaha ammaanka.
Talaabada 1: Dooro soo kabashada Wizard Mode
Kadib markii ay barnaamijka, waxaa laguu keenay in doonaa in aan ka jawaabo labada su'aalood oo fudud kaliya ee aad u baahan tahay in aad soo socda guji iyo Wondershare samayn doonaa inta kale ee aad u.
Talaabada 2: Dooro nooca faylasha aad rabto in aad soo kabsado.
Talaabada 3: Sheeg halka aad badiyay faylasha aad
Talaabada 4: Step4. Ku bilow in aad ka raadin files lumay
Talaabada 5: Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh ceshan aad files lumay
Marka aad doorato soo kabashada Mode Standard aad sidoo kale mid ka mid ah functionalities soo socda soo raaci doontaa.
The kabashada file badiyay - Iyada oo hab soo kabashada, waxaad soo kabsado formatted karo iyo tirtiray files leh magacyadooda file asalka iyo waddooyinkiisa.
Kabashada ah Barzakh, - In uu wadid aad u adag la khilaafo? Hab kabashada Tani waxay kaa caawinaysaa in aad dib u soo ceshano qoruhu ku kharribeen ama laga badiyay, iyadoo qayb kasta oo xogta dhawrsan.
Recovery ceeriin ah - Habkaani wuxuu kuu ogolaanayaa inaad si ay u qabtaan baaritaan qoto dheer oo ku saabsan qalab aad iyo dib u hanato xogta xitaa marka nidaamka file waxaa u kharribmay.
Tani waa Windows qalab kabashada xogta ka shaqeeya iyada oo aan wax dhaawac in xogta aad. Waa dabacsan oo sax ah. Haddii aad leedahay jadwal mashquul, waxaad had iyo jeer ku xasil karo oo la bilaabi habka iskaanka ah ka dib marka aad haysato waqti.
Wonder share kabashada xogta qalab kuu ogolaanaysaa inaad badbaadin natiijada hore iskaanka oo dajiyaan in dib loo bilaabo dib u soo kabashada aan dhowr mar. Iyo sidoo kale in aad shaandhayn kartaa raadinta magac file, size ama taariikhda ah wax ka bedelidii lagu soo saaro si deg deg ah oo mar badbaadiyo. Iyadoo feature Falanqeynta image ka, waxaad ka heli kartaa faylasha aad diirada iyo hubi Xoolahooda iyo tayada hor intaadan go'aansan inaad iyaga soo celiyo. Waxaad xaqiijin karaa ka hor in dhab file kasta waa mid aad rabto in aad soo kaban ama aan. Wondershare Waa qalab ka soo kabashada xogta kama dambaysta ah ee waqtiga oo dhan.
> Resource > Ladnaansho > 3 Siyaabaha tirtireyso shil delete